घर युरोपियन स्टार मार्क-अरेन्ड टरे स्टेजेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको गोल किपर प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नामले चिनिन्छ; "गन्जाहरूसँग मेस्सी"। हाम्रो मार्क-एन्डरेट टरे स्टेगेन बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाताको मिति सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र धेरै अफ-पिच तथ्याङ्कहरू भन्दा कम उनको बारेमा चिन्ता भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनको छिटो रिफ्लेक्स बारे जान्दछन्। यद्यपि, केवल एक हातमा केही प्रशंसकहरू टरे स्टेगेनको जैवको बारेमा धेरै जान्दछन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
मार्क्स अन्ड्रे टेर स्टेगेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
मार्क-एन्ड्रेट टेगे स्टेजेन मान्चेन्ग्लेलाब्याच (जर्मनी) मा अप्रिल 30 को 1992th दिनमा जन्मेको थियो। उनी कैथोलिक घरमा जन्मेका थिए, तिनकी आमा, कोसुना र बुबा, एरिच कौउसलाई। उनको उपनाम, तेर स्टेगेन, यी दिन जर्मनीमा एकदमै साधारण छैन तर यसको उत्पत्ति उनको डच पाङ्ग्रामा छ। Ter Stegen तिनको एकमात्र भाइ, जीन-मार्सेल टरे स्टेगेजेसँग हुर्के।
2 को निविदा उमेर मा, टेरे स्टेगेजेले आफ्नो बुजुर्ग को साथ गैरेज को बीच आफ्नो घर को नजिकै फुटबल खेलना शुरू गर्यो। तीन वर्षको उमेरमा उनले खेलमा प्रारम्भिक चाँडै सिकेका छन्। यो नयाँ कलाकारले आफ्नो दादालाई आफ्नो आमाबाबुले स्थानीय युवा युवा टोलीको रोस्टरमा नामाकरण गरे जसले उनको नयाँ खोज प्रतिभा को प्रदर्शन गर्ने चरण दिए।
टेर स्टेजेनले यसलाई राख्छ;
"मेरो दादाजी मेरो आमा र बुबा जस्तै धेरै थियो। तिनीहरू सबैले मलाई प्रशिक्षण दिए। यसले चाँडो वा हिउँदमा फरक पार्दैन। तिनीहरू कहिलेकाहीं दिन-दिन फुटबलमा पाएनन्, किनभने अन्तमा, कोचले निर्णय गर्छ भने निर्णय गर्दछ। तिनीहरूले मलाई कहिल्यै दबाब दिएनन् र यसले मलाई धेरै सहयोग गर्यो। "
एक गोलकुपर कुन कुराले उत्प्रेरित टरे स्टेगेन
त्यस पछि, टेर स्टेजेनका उद्देश्यहरूले उनीहरूको दिमाग परिवर्तन नगरेसम्म धेरै लक्ष्यहरू पाउने थिए। अचानक, त्यो केवल गोलाबेरी को विचार संग प्यार मा गिर गयो आफ्नो स्थानीय टीम एक पल्ट भाग्यो। जबकि अन्य टोलीले गोल्फेपी को विचार मन परेन, टेस्ट स्टेजेनले स्वयंसेवकाई गर्ने निर्णय गरे। यो ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ कि उनको प्रशिक्षकले गोलकोइपी स्थितिको लागि स्वैच्छिक गर्न उत्प्रेरित गरे किनभने उनी टेर स्टेजेन दौडेनन् जब उनी मैदानको बीच खेल्थे। टेर स्टेजेनले आफ्नो पहिलो गोलकीप म्याच पछि खुसीसाथ सम्झाउँछन्;
"मैले मन परायो कि सबैले मलाई कसरी गोलकीपरको रूपमा व्यवहार गरे। तिनीहरू सधैं मलाई भन्नुभयो 'तिमी राम्रो राम्रो भयो।' त्यो क्षण पछि, मैले लक्ष्य पोस्ट कहिल्यै छोडेन। म मेरो यात्रामा खुसी छु। "
मार्क्स अन्ड्रे टेर स्टेगेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
मार्क-एन्डर्ड टरे स्टेगेजेले आफ्नो स्थानीय क्लबलाई5उमेरमा छोडेपछि उनको आमाबाबुले सफलतापूर्वक तिनको गृहनगरमा बस्न बोरुसिया मुन्चेन्ग्लालेडब्याकको युवा अकादमीमा नामाकरण गरे। जस्तै मार्कस Rashford, Ter Stegen स्थानीय मोन्चेन्ग्लाल्डब्याकका प्रशंसकहरूले धेरै मन पराएका थिए जसले उनीहरूलाई आफ्नै आफ्नै रूपमा देखे।
Ter Stegen युवा अकादमी मा एक whopping 14 वर्ष (1996 देखि 2010) बिताए, क्लब को वरिष्ठ टीम को लागि पदोन्नति देखि पहिले सबै गोलकीपर रैंक को अगाडी बढाया।
उनको वरिष्ठ क्यामेरा पनि 2010 मा आफ्नो गृहनगर क्लब, बोरोस मान्चेन्ग्लालेडब्याच मा शुरु भयो। त्यो सिजन सिजन, उनले आफूलाई टोलीको पहिलो छनौट पछि रेखामा अर्को गोल गरेकी थिइन्। जब उनी एक अपेक्षाकृत सफल सिजनको आनन्द लिइरहेकी थिइन्, त्यसैमा उनीहरूको पहिलो-साथी सहकर्मीहरूको लागि विनियमनका लागि लड्न सकेन।
जबकि वरिष्ठ पक्ष प्रतीत देखि बचने को प्रयास मा असफल भयो राजनैतिकता, उनको प्रबन्धक माइकल फ्रंटजेक को लुइसियन फेवर द्वारा प्रतिस्थापित भएको थियो जसले टीम को लागि अधिक अनुशासन को पतन गर्यो जो परिणाम सुधार भएको थियो। परिणाम सुधारको बावजुद, टोलीमा कसैले कसैको खराब व्यवहार रवैया गरेको थियो जुन टोली खर्च गर्दछ। यो उनको पहिलो-छनौट गोलकीपरबाट आयो Logan Bailly जसरी उनले टाउको राखे। मन्चेन्जलेडब्याकका प्रशंसकहरू बेल्जियम अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा छिटो पछाडी छिरेका थिए, केहीले उनीहरूलाई उनको फुटबल भन्दा बढी मोडल क्यारियरमा थप प्रयास लगाउन लगाए।
तथापि, रिजर्व टोलीका लागि टरे स्टेगेजेको प्रगति समर्थकहरूले अनावश्यक पारेको छैन। नयाँ प्रबन्धकले लीगमा जवान कमजोरी सुरु गर्न दबाइरहेको थियो। धैर्य पूर्ण रूपमा बेमेल संग हराएको थियो जसले उहाँलाई टेर स्टेजेनको पक्षमा बेंचमा ल्याएको थियो। जवान जर्मन निराश भएन, उनले अयोग्य दृढता संग घमन्ड गर्न रक्षा गरे। पर्याप्त साफ-पानाहरू राख्दै, तिनको टोलीले गुजाराबाट बचाइयो।
एफसी बार्सिलोना स्केट्स जसले विक्टर वाल्डेको खोजी गर्दै प्रतिस्थापित गर्यो उनीहरूको प्रभुत्व उनको क्लबको लागि विश्वव्यापी रूपमा बचाउँदछ। 19 मई 2014 मा, टेर स्टेजेन को स्पेक्ट्री क्लब बार्सिलोना को नयाँ गोलाकार को रूपमा घोषित गरिएको थियो, पछि विकक्टर Valdés र जोसेन मैन्युअल पिंटो को प्रस्थान पछि। एफसी बार्सिलोनामा, उनको प्रदर्शनले उनलाई यूरोपको सबैभन्दा राम्रो स्थानको रूपमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
मार्क्स अन्ड्रे टेर स्टेगेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
हरेक महान मानिसको पछि, एक ठूलो महिला छ, वा यसो भन्दै जान्छ। र लगभग हरेक जर्मन गोलाकार पछि, त्यहाँ ग्लैमरस पत्नी वा प्रेमिका हो। मार्-अन्ड्रे टेर स्टेजेनसँग प्रेम प्रेम छ। ड्यानिला जाले पहिले प्रेमिका र टरे स्टेगेजेनको पत्नी हो। दुबैलाई सुरु भयो जो कि किशोरहरु को सम्बन्ध मा तिनीहरूलाई चित्रण गरी सबैभन्दा राम्रो साथीको स्थितिबाट सच्चा प्रेमलाई लिईयो।
डेनिला जालेका चार बहिनीहरू छन्; दुई बहिनीहरू Katharina र Stefanie नाउँ गरे, तिमो नामको एक भाइ र लिन्टेन नामक एक बहिनी बहिनी। क्यालिफोर्नियाको स्यान डिएगोमा डच सुन्दरता उनको उच्च विद्यालय थियो। उनको प्रेमीको कारण (टरे स्टेगेन, तिनले बार्सिलोनामा आफ्नो विश्वविद्यालय शिक्षा (वास्तुकला अध्ययन) जारी राख्न निर्णय गरे।
मार्क-अन्ड्रे टरे स्टेगेन र प्रेमिका ज्यानले एक्लै बस्न थालेको थियो। शॉट-स्टपरपर टेस्ट स्टेजेनले साबित गरे कि उनीहरु डेटिङ पछि गाँठो बाँडेर एक उचित रक्षक हुन् राख्नु पाँच वर्षको लागि डच सुन्दरता
Jehle र Ter Stegen एक बाली नामक कुकुर छ जो क्रिसमस 2012 मा हराएको थियो तर फेला परेन। बाली डनीला योएलले राख्छ जब उनको म्यान अफ ट्रेनिंगको लागि वा क्लबको खेल्ने खेलियो।
मार्क्स अन्ड्रे टेर स्टेगेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यू र ए
मार्क आर्द्र तेर स्टेगेजेनले कातालान दैनिक खेलको लागि विशेष साक्षात्कार दिए
प्रश्न: के यो सत्य हो कि तपाइँका एक प्रशिक्षकले तपाईंलाई भाग्यो जस्तो मनपराउने थिएन र यसले तपाईलाई गोल गर्नुपर्यो?
A: Ter Stegen मुस्कान र प्रतिक्रिया;
"हो, यो अजीब देखिन्छ, तर यो सत्य हो। यो मेरो लागि पहिलो पटक स्वीकार गर्न गाह्रो थियो, तर मेरो जीवनमा मैले राम्रो निर्णय गरेको थियो। उनले भन्यो कि म बस दौडने तरिका मनपराएन। मैले भर्खर एक गोलकीपरको रूपमा राम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न खोजे। "
प्रश्न: Valdés र Mascherano एक पटक फुटबलको मजा गरे भन्दा एक पल्ट भन्नुभयो, तिनीहरू पीडा भएको छ। के तपाईसँग कहिल्यै खराब समय छ?
A: Ter Stegen प्रतिक्रिया गर्दछ;
"मैले के गरें, 100%। प्रत्येक व्यक्ति फरक छ, तर म क्षेत्रमा के गर्छु। म सँगसँगै साथीहरू हौं कि म राम्ररी सँगसँगै जान्छु र उनीहरुसंग मलाई सजिलै संग खेल्न अनुमति दिन्छु। यसले मलाई जस्तै मनपर्ने अनुमति दिन्छ। यसैले म यहाँ हुँ। मलाई फुटबल मन पर्छ। मेरो उत्कृष्ट साथीहरू छन्। मेरो लागि, त्यहाँ कुनै पनि तरिका छैन जुन तपाइँ फुटबलको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्न। "
प्रश्न: जीके सबै भन्दा गल्तिहरू बनाउनको लागी प्रख्यात छ। गल्तीहरू हटाउन तपाईं के गर्नुहुन्छ र तपाईं कसरी मानसिक व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
"गल्तीहरू मानवलाई केही कुरा हो, यसकारण म यो तरिकाको व्यवहार गर्दछु। अन्तमा हामी सबै असफल छौं। त्यहाँ सँधै चीजहरू सुधार गर्न सकिन्छ। म सधैं विफलताहरू जोगाउन प्रयास गर्दछु। गल्तीहरू अवधारणाहरू हुन्। यदि गल्तीहरू असफलताको अवधारणा हो भने, यो असफलताबाट फरक छ किनभने तपाईंले धेरै खतराहरू लिनुभएको छ; तपाईं गल्तीबाट बच्न सक्नुहुन्छ। "
प्रश्न: तपाईं कसरी दबावसँग सामना गर्नुहुन्छ?
"प्रत्येक व्यक्तिसँग फरक व्यक्तित्व छ। मेरो लागि, म मान्छेसँग कुरा गर्न चाहन्छु। जब म घरमा छु, म मेरी पत्नीसित कुरा गर्न चाहन्छु। उनी फुटबलको बारेमा साँच्चै हेरचाह गर्दैनन्, तर उहाँ साँच्चै मेरो नजिक हुनुहुन्छ र यसले मलाई धेरै सहयोग गर्दछ। "
प्रश्न: तपाईले ओलिभर कानलाई तपाईको कुनै एक प्रभावको रूपमा उल्लेख गर्दछ। किन?
"हो, खासगरी यसको मानसिकताको कारण। उहाँले आफ्नो दिमाग कहिल्यै गुमाउनु भएको छैन, उनले के गरेनन्। निस्सन्देह, तिनले परवाह गरेनन्, तर तपाईंले कहिल्यै सोचेको छैन कि यसले व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई असर पार्छ। त्यहाँ फुटबलमा भएका चीजहरू छन् र त्यहाँ व्यक्तिगत स्तरमा हुने चीजहरू छन्। "
मार्क्स अन्ड्रे टेर स्टेगेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन तथ्य
Ter Stegen व्यावहारिक र राम्रो-आधारित छ। उहाँ कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्नो श्रमको फल फसलको माया गर्नुहुन्छ। Te Stegen चीजहरू एक जटिल, व्यावहारिक र यथार्थवादी परिप्रेक्ष्यबाट हेर्छन्।
Ter Stegen कुनै व्यक्ति हो जुन प्रेम र सौन्दर्य घनिष्ठ हुन आवश्यक छ। यो उसले आफ्नी श्रीमती डेनला जालेलाई हेर्छ।
Ter Stegen कामुक, चकलेट हो र सबै इन्द्रहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्पर्श र स्वाद दिन्छ।
उनीहरूको आमाबाबुको समर्थनको लागि धन्यवाद, टेरे स्टेगेजेले स्थिर र रूढिवादी व्यक्ति बन्न पुग्यो। उहाँ को हुनुहुन्छ जो सहन तयार छ र आफ्नो छनौट सम्म रहन तयार छ जबसम्म तिनीहरू व्यक्तिगत सन्तुष्टिको बिन्दुमा पुग्छन्।
मार्क्स अन्ड्रे टेर स्टेगेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
उनको सहायक आमाबाबु, नवीकरण कोउज र एरिच कौजले आफ्नो प्रारम्भिक क्यारियर डेभलपमेन्टको दौडान उनीहरूको सहयोगबाट धेरै लाभ उठाउन टरे स्टेगेन गरे। आफ्नो निर्णयको लागि उनीहरूको सहयोगको साथ, उनीहरुका पुत्र बढ्दै गयो र उनको गोलाबारी व्यापारमा सफल भयो त्यसैले यसैले उनलाई आजको व्यक्ति भनिन्छ।
भाइ: माथि उल्लेखित रूपमा, टेर स्टेजेनले जेन मार्सेल नाउँ गरेको एकजना भाइ हो। उहाँ टरे स्टेगेजे भन्दा6वर्ष भन्दा बढी हुनुहुन्छ। दुबै भाईहरूले आफ्नो घर नजिकको गेराज बीच खेल्न थाले। टरे स्टेगेनले गोल गरेपछि गोल गरे, जुआन मार्सेलले उनीहरूलाई दुई खुट्टासँग कसरी गोली हानेर सिके।
मार्क्स अन्ड्रे टेर स्टेगेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उनको उपनाम अस्वीकार गर्दछ
मार्क-एन्डर्ड टेरे स्टेजेनले एक पटक आफूलाई तुलना गर्न नसकेको एक कदम बनायो लिओनेल मेस्सी उपनाम हस्तक्षेप गरे तापनि 'मेस्सीको साथ मेस्सी'। यो जब आउँथ्यो जब जर्मन स्टपर उनको गुप्त क्षमता र स्मार्ट वितरणको लागि ओभरप्राज गरिएको थियो।
बलियो डीभी वा विजेता गर्ने क्षमताको तुलनामा Messi, टरे स्टेगेन आफुलाई चापलूसी मोनिकर बाट अलग गर्न उत्प्रेरित भयो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मार्क-एन्ड्रेर टेस्ट पढ्नको लागि धन्यवाद Stegen बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी तथ्यहरू। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.